Cat Tree, Pet Furniture, Pet Door, Pet Beds, Pet Bag, Pet Cushion - Fanhao
Leash & Sungai
Ningbo Fanhao Pet Products Co., Ltd kwakawanikwa mukati 2008. fekitari yedu iri No23, Bldg 3, Innovation 128, 818 Qiming Road Yinzhou, Zhejiang China. Zvinotora maminitsi 30 kubva Ningbo Airport kusvika vekwedu. Makore 10 kusimukira, ikozvino tiri pamusoro 300 vashandi uye 30.000 mativi mamita kugadzirwa nharaunda.
boka redu kunyanya unobereka katsi muti, mhuka mibhedha, dzinovaraidza pamakusheni & dzimba, dzinovaraidza joko, dzinovaraidza strollers, dzinovaraidza bags.Our pamwedzi kugadzirwa vanokwanisa iri approx. 120pcs 40ft mumagaba. Tine pachedu marapirwo yedu uye kukura dhipatimendi, mwedzi dzose tinoratidza zvinhu zvitsva edu ekare vatengi. OEM zvinogara kugamuchirwa.
Tinogamuchira pachokwadi shamwari & vatengi zvitsva nezvitsaru kubva rose kwatiri runhare kuti rivake pedyo mabhizimisi ukama uye tinotarisira yakabudirira uye mukuru dzekuno nokubudirira nemi.
2017 China rine Dete nyoro & yemapuranga katsi ...
Factory yakananga rinobatsirwa katsi fenicha, katsi UYU ...
Factory nokutengesa katsi Condo, scratching post, CA ...
Amazon Best kutengesa Wooden Pet House, Cat Tower ...
Popular Style katsi scratching post, inovaraidza imba, c ...
LEASH & hanesi
Tiri kusangana kuti bhizimisi uye zvokutengeserana, isu kuita kbps dzinovaraidza zvinhu uyewo yomunzvimbo rinozivikanwa muchiso. zvigadzirwa edu ose aiming kuunza mhuka dzinovaraidza yakawanda kurerukirwa uye vanotungamirirawo dzinovaraidza chipenyu nenzira utano. Tiri mubasa pamasikiro, kugadzira uye kutengesa mhuka zvigadzirwa.